Mpanamboatra jig Yamashita Squid - Sina mpamatsy jiro Yamashita Squid China
Fivarotana sifotra mafana
1. Fomba fanjonoana: fanjonoana fanjonoana trondro sy fanjonoana an-tsambo, jono, jono, jono, jono, jono, jono
2.Lure Type: Jig Head Jigs - Ny jono miaraka amin'ny jig dia heverina ho fomba tena mahomby amin'ny fisamborana basika sy trondro vaventy, rano mangatsiaka hafa izay mamaly tsara ny fihetsiketsehana jig milanja., Bait Malemy - plastika malefaka maunu dia misy maodely isan-karazany, ampiasaina amin'ny jono baskety. Shaddai
Fivarotana Laser Squid Jig Lure
1. Fomba fanjonoana: jono todika amin'ny jono amin'ny jono.
2.Lure Type: Jigs Pencil - Ny jono amin'ny jigs dia heverina ho fomba tena mahomby amin'ny fisamborana basika sy trondro lehibe sy rano madio izay mamaly tsara ny fivezivezin'ny jig milanja. Bait mafy
Horita horita Japon Yamashita Shidimp Squid Hook Yozuri Squid Jig
Fangalana jono 56 Pcs, azo ampiasaina imbetsaka, manome anao ny fahafaha-manjono amin'ny toerana rehetra ao anaty rano.
Ny vatan'ny plastika mafy ABS mateza, firakotra tsara tarehy, ary farango vy maranitra dia nametraka ny baito mafy kalitao.
Misy baolina vy ao anatiny izay afaka mikoriana mankany amin'ny rambony mandritra ny fotoana fandefasana azy mba hanampiana anao handroso bebe kokoa ary hiantohana ny fikorianan'ny lomano amin'ny maunu rehetra.
Miasa tsara na amin'ny ranona sira na amin'ny rano velona. Mamokatra rehefa mandeha trolling, misidina amin'ny salmon, trout sea, striper, pike, bass, musky sns.
1.Fomba fanjonoana: jono mihodina manary jono manjono
2.Lure Type: Lure Packs Crank - Ny Bass manokana indrindra dia mahita fa ity manintona ity dia manintona tena manintona., Minnow - Ny hazandrano Minnow dia toy ny trondro ary entina mamakivaky ny rano izy ireo amin'izay ahafahany mihetsika amin'ny fomba samihafa noho ny tsy fandriam-pahalemana noho ny bib eo alohan'ny lohany. Bait mafy
Fihetsiketsehana 3.Lure: Milentika - Ny jono lentika dia marina, azonao atao tsara ny mahalala hoe aiza ilay fisarihana ary manjono azy amin'ny haavo mety. Ny filomanosana totofana dia miasa tsara indrindra amin'ny toetr'andro misy rivotra sy marokoroko Azo zahana ny hamafazana totohondry, azo ampiasaina eo an-tampon'ny tsanganana rano izy ireo ary koa eo ambany, Mitsingevana - Mivezivezy eo ambonin'ny rano mba hisarihana sy hahatonga ny trondro hanandrana hamely ilay hetaheta.
fepetra arahana General
Fomba fanjonoana: fihodinana, Bait Casting, Fanjonoana am-pitaka, Fanjonoana trondro
Fitaovana: Plastika, Manel Alloy
Lanjam-be (g): 38
Karazan-jaza: fonosana azo, Crank, Minnow, Bait mafy
Hetsika misarika: milentika, mitsinkafona
Lure Lure (cm): 8.5 10 11.5 13.5 15
The Squid Jig Lure In China
Ny lanjan'ny fitarihana avo lenta, ny famolavolana manokana dia afaka manampy bebe kokoa.
Vy vy mahery tsy misy fangarony vy maranitra
Fonosina lamba mamirapiratra mamiratra amin'ny uv, loko avana, manintona trondro
Fitaovam-piadiana jir malefaka avo lenta
Japoney Yamashita Wooden Egi Yozuri Squid Jig Shrimp
.56 Pcs fanjonoana trondro, azo ampiasaina imbetsaka, manome anao ny fahafaha-manjono amin'ny toerana rehetra ao anaty rano.
.Ny vatana plastika mafy vita amin'ny ABS, ny firakotra tsara tarehy, ary ny farango vy maranitra dia nametraka ny bazana mafy kalitao.
.Misy baolina vy ao anatiny izay afaka mikoriana mankany amin'ny rambony mandritra ny fotoana fandefasana azy hanampiana anao handroaka lavitra kokoa ary hiantohana ny fikorianan'ny lomano amin'ny maunu rehetra.
.Masa tsara ho an'ny ranomasina sy ny rano velona. Mamokatra rehefa mandeha trolling, misidina amin'ny salmon, trout, striper, pike, bass, musky sns.
2.Lure Type: Lure Packs Crank - Ny Bass manokana indrindra dia mahita fa tena manintona ity karazan-jaza ity., Minnow - Ny fisokafan'ny Minnow dia toy ny trondro ary mihazakazaka mamaky ny rano ahafahany mihetsika amin'ny fomba samihafa izy ireo noho ny tsy fandriam-pahalemana noho ny bib eo aloha eo ambanin'ny loha. Bait mafy
Fomba fanjonoana: fihodinana, fanamboaran-jaza, jono azo, jono
Fitaovana: Plastika, firaka Manel
Karazan-jaza: Kitapom-bolo, kitapo, minona, bazitra mafy
Fihetsiketsehana misarika: Milentika, mitsingevana
1.Super maranitra sy mateza, vita amin'ny vy karbaona avo lenta
2.Ny sisiny maranitra, hamafisana avo, henjana matanjaka, famirapiratana tsara
3. loko avo taratra sy mamirapiratra hisarihana trondro lehibe
Jono azo avy amin'ny jono mitarika sombin-jaza orita horita horita hazo fihinam-bolo miaraka amin'ny famahana
Lidia trondro Jig
Hanavao Naory OPPAI SUTTE WJ.
Karazan-trondro: trondro hazandrano atsimo
Toerana ： SHORE